Iyo yakanakisa bhodhi mitambo yemhuri | Ndipewo zororo
Mitambo yakanakisa yebhodhi yemhuri
Isaac | 17/12/2021 17:47 | Yakagadziridzwa ku 21/12/2021 09:02 | General
Zvinhu zvishoma zviri nani pane kupedza nguva nevadiwa vako, nemumwe wako, mhuri yako, kana vana vako. Kupedza mazuva, masikati nehusiku tichitamba kumba uye nekusiya dzimwe dzenguva dzisingakanganwike dzinogara dzichiyeukwa. Uye kuti izvi zvigoneke, iwe uchada zvimwe zve yakanakisa mitambo yebhodhi yemhuri. Ndokureva, mitambo yebhodhi inofarirwa nemunhu wese, vana, vechidiki, vakuru nevakuru.
Nekudaro, nekupihwa huwandu hwemitambo iripo uye kuti zvakaoma sei kuita kuti munhu wese aenzane kunakidzwa, harisi basa riri nyore kusarudza. Pano isu tinokubatsira kuti uzviite, nemamwe emhando yepamusoro kurudziro, ne kutengesa zvakanyanya uye kunakidza chii chaungawane...
1 Iyo yakanakisa bhodhi mitambo yekutamba nemhuri
1.1 Diset Party & Co Mhuri
1.2 Kutsvaga Kuderera Mhuri
1.4 Kukura kwemhuri
1.6 Rudo nemashoko Mhuri Edition
1.7 Bizak Vana vachipesana nevabereki
1.9 Bang! The Wild West mutambo
1.10 Gloom Inopportune Vaenzi
2 Kunakidzwa kwemitambo yebhodhi kutamba semhuri
2.1 Game Off Battalion yemusoro-kune-musoro duels
2.3 Nyaya cubes
3 Nzira yekusarudza yakanaka mhuri bhodhi mutambo?
Iyo yakanakisa bhodhi mitambo yekutamba nemhuri
Kune mimwe mitambo yebhodhi yekutamba semhuri iri pakati peyakatanhamara. Mabasa echokwadi ehunyanzvi hwekutandara uye kunakidza kushandisa nguva dzakanakisa nevadikanwi vako uye kazhinji vane mazera akasiyana-siyana, kuwedzera pakubvuma mapoka makuru evatambi. Vamwe recommendations Ndizvo:
Diset Party & Co Mhuri
Diset - Bato & Co Mhuri ...
IParty yemhando yepamusoro, asi mune yakakosha edition yemhuri. Inokodzera kubva pamakore masere. Mariri iwe unofanirwa kuita bvunzo dzakawanda kana yave nguva yako, uye inogona kuridzwa muzvikwata. Tevedzera, dhirowa, tevedzera, pindura mibvunzo, uye pfuura mibvunzo inonakidza. Nzira yekuvandudza kutaurirana, kuona, kutamba kwechikwata, uye kukunda kunyara.
Tenga Party & Co.
Kutsvaga Kuderera Mhuri
Trivial board game ...
Mutambo wakakodzera mazera ese kubva pamakore masere. Ndiwo mutambo wemhando yepamusoro wemubvunzo nemhinduro, asi mune edition yemhuri, sezvo ichisanganisira makadhi evana nemakadhi evakuru, ane mazana maviri nemazana emibvunzo yetsika dzeruzhinji kuti uedze ruzivo rwako. Pamusoro pezvo, dambudziko reShowdown rinosanganisirwa.
Mattel Mitambo -...
Vanogona kutamba vese kubva pamakore masere ezera, nekukwanisa kutamba kubva pavatambi vaviri kusvika 8 kana kugadzira zvikwata. Ndiyo imwe yeakanakisa bhodhi mitambo yemhuri, ine chinangwa chekufungidzira izwi kana chirevo kuburikidza nemifananidzo. Inosanganisira bhodhi chena, mamakisi, makadhi e index, bhodhi, wachi yenguva, dhayisi, uye 2 makadhi.
MHURI BOOM - Mutambo we ...
Mhuri yese inogona kupinda mumutambo uyu wekare. 300 makadhi akasiyana uye anonakidza, bhodhi, nyore kutamba, nematambudziko, zviito, zvirahwe, kupuruzira, zvirango zvekubiridzira, nezvimwe. Nzira yakanaka yekuunganidza vese vaunoda uye uve nenguva yakanaka.
Tenga Mhuri Boom
Repos Kugadzirwa-Pfungwa ...
Mhuri yese inogona kutamba, inokurudzirwa kubva pamakore gumi ezera. Iwo mutambo unonakidza uye une simba umo iwe unovandudza hunyanzvi hwako uye fungidziro yekugadzirisa mapuzzle. Mutambi anofanira kusanganisa zvidhori kana zviratidzo kuyedza kuita kuti vamwe vafembere zvazvinoreva (mavara, mazita, zvinhu, ...).
Rudo nemashoko Mhuri Edition
KUDA NEMASHOKO -...
Mutambo wevadiki nevakuru, kutamba semhuri uye kubatsira kusimbisa hukama pakati pevatori vechikamu. Yakagadzirirwa kukwezva vazukuru, vanasekuru, vabereki nevana, ichivabatsira kuva nenguva yakanaka nemakadhi zana nemakumi maviri ane mibvunzo inonakidza uye sarudzo dzinotungamira kune dzakasiyana nhaurirano misoro.
Tenga rudo nemashoko
Bizak Vana vachipesana nevabereki
Bizak Game Vanakomana Kurwisa ...
Imwe yemitambo yakanakisa yebhodhi yemhuri, ine mibvunzo nematambudziko kune ese nhengo. Anokunda ndiye achayambuka bhodhi kutanga, asi pane izvo unofanira kuwana mibvunzo nemazvo. Inoridzwa mumapoka, nevana vachipesana nevabereki, kunyange zvazvo mapoka akasanganiswa anogonawo kuitwa.
Kutenga vana nevabereki
Edge Varaidzo -...
Mumutambo uyu webhodhi wemhuri, mutambi wega wega anotora chinzvimbo chemhuka yakafukidzwa iyo inofanirwa kuponesa musikana wavanoyemura, sezvo akapambwa nechakaipa uye chisinganzwisisike. Bhuku renyaya rinosanganisirwa richaita segwara kunyaya uye matanho ekutevera pabhodhi ...
Tenga Ngano Dzakabatikana
Bang! The Wild West mutambo
Mutambo wemakadhi unokudzosera kunguva dzeWild West, mumugwagwa une guruva une duel kurufu. Mariri, vapambi vachatarisana nesheriff, sheriff vachipokana nevapanduki, uye mupanduki achagadzira chirongwa chakavanzika chekubatana nechero bamdos ...
Gloom Inopportune Vaenzi
Mutambo umo muchava nevaenzi vanotyisa, mhuri yemakororo, uye imba huru. Chii chinogona kuipa? Uyu ndiwo mutambo wekadhi weGloom, unouya sekuwedzera kumutambo wekutanga.
Kutenga Inopportune Vaenzi
Kunakidzwa kwemitambo yebhodhi kutamba semhuri
Asi kana chauri kutsvaga chiri kuenda mberi zvishoma wotsvaga mitambo yebhodhi inosekesa kuti usarega kuseka, kuchema nekuseka, uye kurwadzisa dumbu rako, heano mamwe mazita anoita kuti uve nenguva yakanaka:
Game Off Battalion yemusoro-kune-musoro duels
Mutambo webhodhi wemhuri wakakodzera mazera ese, wakagadzirirwa vanhu vanokwikwidza uye vanonetsa. Iyo ine 120 yakasarudzika duels yekuita chiso nechiso nehama dzako. Mavari unofanira kuratidza kugona kwako, rombo rakanaka, ushingi, kugona kwepfungwa kana kwemuviri. Inokurumidza uye inonakidza duels inogadzirwa, nepo vamwe vatambi vachiita sejuri kusarudza anokunda. Unoshinga here?
Tenga Game Off
Glop Mimika - Mutambo we ...
Imwe yemitambo yaunofarira mhuri yekuyedza nayo moyo murefu, kutaurirana uye kugona kutapurirana kuburikidza nekutevedzera. Inokodzera vana, vechidiki uye vakuru. Wese munhu achanakidzwa nekutamba nekudyidzana. Inosanganisira mazana maviri nemakumi mashanu makadhi emapoka akasiyana uye uchafanirwa kuita kuti vamwe vafembere zvauri kuda kutaura kuburikidza nekuita.
Asmodee- Nyaya Cubes ...
Mutambo uyu ndeweavo vanoda fungidziro, kugadzirwa uye kunakidza kutaura nyaya. Iine 9 dice (mood, chiratidzo, chinhu, nzvimbo, ...) iyo iwe yaunogona kutenderedza neinodarika miriyoni misanganiswa yenyaya dzauchafanirwa kugadzira zvichienderana nezvawauya nazvo. Inokodzera zera 1 zvichikwira.
Imwe yemitambo yakanakisa yekunakidzwa kwemhuri. Iine mat ine mavara apo iwe uchafanirwa kutsigira chikamu chemuviri chinoratidzwa mubhokisi reroulette kwawamhara. Mamiriro acho achanetsa, asi achaita kuti useke.
Cocktail Games- Ugha ...
Mutambo wemakadhi emhuri yese, wakakodzera zera 7+. Mariri iwe unopinda shangu dze prehistoric rudzi rwe cavemen, uye mutambi wega wega achafanira kudzokorora nhevedzano yeruzha nekugunun'una zvinoenderana nemakadhi anobuda uye nechinangwa chekuve mutungamiriri mutsva wedzinza. Chinhu chinonyepa pamutambo uyu ndechekuti uchafanirwa kubata nemusoro manzwi kana zviito zvemakadhi anozoungana zvishoma nezvishoma uye unofanira kuatamba nenzira kwayo ...
Tenga Ugha Bugha
Devir - Ubongo, mutambo we ...
Ubongo ndeimwe yemitambo inonakidza yemhuri yese, yakakurudzirwa vanhu vanopfuura makore masere. Vagadziri vayo vanovimbisa kuti inopenga nekuda kwemaitiro evatambi vanoedza kuenzanisa zvidimbu muchikwata chavo panguva imwe chete; zvinopinda muropa nokuti paunotanga hauzokwanisi kumira; uye nyore maererano nemitemo yayo.
Nzira yekusarudza yakanaka mhuri bhodhi mutambo?
Kusarudza zvakanaka mitambo yebhodhi yemhuri yakanakisa, zvimwe zvakakosha zvinofanirwa kuverengerwa:
Vanofanira kunge vaine curve yekudzidza iri nyore. Izvo zvakakosha kuti makanika emutambo ari nyore kunzwisisa kune vese vadiki nevakuru.
Dzinofanira kuva dzisingachinji sezvinobvira, nokuti kana dzine chokuita nekare kana kuti nezvimwe zvinhu zvazvino uno, vaduku navakuru vacharasika.
Uye, hongu, inofanirwa kuve inonakidza kune wese munhu, ine generic theme uye isina kunanga kune chaivo vateereri. Muchidimbu, iva nezera rakakura rakakurudzirwa.
Zviri mukati zvinofanirwa kunge zviri zvevateereri vese, ndiko kuti, hazvifanirwe kuganhurirwa kuvanhu vakuru chete.
Kuve kumhuri yese, inofanirwa kunge iri mitambo yaunogona kutora chikamu mumapoka kana inobvuma nhamba huru yevatambi kuitira kuti pasave neanosiiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Mitambo yakanakisa yebhodhi yemhuri
Yakanakisa bhodhi mitambo yevakuru